Prof. Axmed Ismacil Samatar oo Saacadaha Soo Socda uu Dalka ka dhoofaya iyo Khilaafkii ka Dhex-qarxay Madaxweynaha Cusub Muuse Biixi oo Loo Maaro la Yahay...Sacad Cali Shire oo ku Fashilmay Siyaasadda arrimaha dibeda iyo Golaha Wasiirada Muuse oo laga Dayriyey Tayadooda + Faashilaad laga cabsi qabo inay la Kowsato
Thursday December 14, 2017 - 02:59:33 in Wararka by Super Admin
Prof. Axmed Ismacil Samatar oo Saacadaha Soo Socda uu Dalka ka dhoofaya iyo Khilaafkii ka Dhex-qarxay Madaxweynaha Cusub Muuse Biixi oo Loo Maaro la Yahay...Sacad Cali Shire oo ku Fashilmay Siyaasadda arrimaha dibeda iyo Golaha Wasiirada Muuse oo lag
Hargeysa(Xogreebnews.com)- Prof. Axmed Ismacil Samatar, ayaa la sheegay inuu Saacadaha soo socda dalka ka dhoofi doono.
Warar lagu kalsoon yahay, ayaa tibbaaxay Inuu khilaaf culus oo xalkiisa loo maaro waayey durba ka dhex qarxay Prof. Axmed Ismaacil Samatar iyo Madaxweynaha cusub ee Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi.
Khilaafkan, ayaa la sheegay inuu salka ku hayo balan darro uu Kala kulmay Prof. Axmed Samatar Madaxweynaha uu sida weyn ugu ololeeyey ee Muuse Biixi Cabdi, wararku waxay intaa ku dareen in khilaafka dibeda usoo baxay Maanta markii aqoonyahan Axmed Ismacil Samatar oo Kamid ahaa gudida qaban qaabada xafladii xil wareejintu aanu kasoo qaybgelin.
Wararku waxay intaa ku Dareen in Aqoonyahan Axmed Ismaacil Samatar 15-ka bishan dalka ka dhoofaya. Sidoo kale arrimaha Khilaafka Keenay ayaa lagu sheegay inay kamid tahay in Muuse Biixi maalmahan lasoo baxay inuu wasiirkii arimaha dibeda ku fashilmay Sacad Cali Shire, damacsan yahay inuu kusoo daro golaha wasiiradda, kaasoo hadii uu Kamid noqdo Sacad ama masuul wasiirka ahaa Xukuumadii boobka iyo baaba dhaxalsiisay ay wasiiradeedu soo noqdaan inay fashilmi doonto Xukuumad kastaa oo u soo dhiso Madaxweyne Muuse Biixi. Iyadoo taa bedelkeeda laga filayo wajiyo cusub oo aqoontoodu sarayso.